के विक्की कौशल र कट्रिना कैफ बिहे गर्दैछन्? :: Setopati
के विक्की कौशल र कट्रिना कैफ बिहे गर्दैछन्?
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, भदौ १८
बलिउड अभिनेता विक्की कौशल र अभिनेत्री कट्रिना कैफबीचको सम्बन्धबारे अहिले निकै चर्चा चलेको छ। उनीहरु प्रेममा रहेको हल्ला फैलिरहेको छ र प्रशंसकहरु पनि उनीहरुको सम्बन्धलाई लिएर उत्साहित देखिएका छन्।
केहीले उनीहरु डेट गरिरहेको बताएका छन्। केहीले विक्की र कट्रिनाको गुपचुप इन्गेजमेन्ट भइसकेको समेत अनुमान गरेका छन्।
विक्की र कट्रिनाका परिवारले उनीहरुको इन्गेजमेन्टबारे चलेको हल्ला झुटो रहेको बताएका छन्। तर अब प्रशंसकहरु उनीहरुको बिहेको प्रतीक्षा गर्दैछन्। सामाजिक सञ्जालमा विक्की र कट्रिनाको बिहे हुन लागेको कुरा छ।
उनीहरु आउँदो डिसेम्बर महिनामा बिहे गर्ने तयारीमा रहेको लाइफस्टाइल एसियाले लेखेको थियो। सो समाचारमा विक्की र कट्रिनाको बिहे राजस्थानको उदयपुरमा भव्यसँग हुने भनिएको थियो, तर केही समयपछि लाइफस्टाइलले त्यो सामग्री हटायो।
यो समाचार विक्की र कट्रिनाका कयौं प्रशंसकले पढ्न भ्याइसकेका थिए। त्यसैले धेरै जना त्यो खबर सही भएको ठानेर रमाइरहेका छन्।
बलिउड लाइफका अनुसार जसरी विक्की र कट्रिनाको इन्गेजमेन्टको जानकारी झुटो थियो त्यसैगरी उनीहरुको डिसेम्बरमा बिहे हुने कुरा पनि साँचो होइन। उनीहरु आफ्नो आउँदो प्रोजेक्टमा व्यस्त छन् र बिहे हुने कुनै तयारी छैन। विक्की र कट्रिनाको मित्रता गहिरो छ तर उनीहरु यति चाँडै बिहे गर्ने सुरसारमा भने नरहेको बलिउडको भित्री श्रोतले बताएको छ।
उनीहरु अहिले एकअर्कालाई डेट गरिरहे पनि बिहे निकै परको कुरा रहेको बलिउड लाइफको भनाइ छ। हाल कट्रिना ‘टाइगर ३’को सुटिङमा व्यस्त छिन्। फिल्ममा सलमान खानको पनि अभिनय छ। उनीहरु अहिले सुटिङको लागि टर्की पुगेका छन्। यता विक्की कौशल भने साम मानेकशाको बायोपिकका लागि तयारी गरिरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १८, २०७८, १५:३०:११